people Nepal » आजका पत्रपत्रिकाहरुमा के के छापिए ? आजका पत्रपत्रिकाहरुमा के के छापिए ? – people Nepal
आजका पत्रपत्रिकाहरुमा के के छापिए ?
Posted on April 2, 2017 April 2, 2017 by Durga Panta
२० चैत, काठमाडौं । आजका सबैजसो राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुले निर्वाचन आयोगले आजदेखि थाल्ने मतपत्र नामावली र परिचयपत्र छपाईको कामलाई मुख्य खबर बनाएका छन् । रेलमा चीनको उच्च चासो, सरकार-मधेसी मोर्चा वार्ताको पछिल्लो प्रगतिलगायत खबर पनि पत्रिकाहरुको उत्तिकै प्राथमिकतामा परेको छ । सरकारी निकायहरुले नै खानेपानीको बिल नतिरेको विषय केही पत्रिकाले जोडदारका साथ उठाएका छन् ।
गोरखापत्र दैनिकले ‘मतदाता नामावली र परिचयपत्र छपाइ आजदेखि’ शीर्षक राखेर मुख्य खबर लेखेको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संविधान संशोधन टुंगाउने प्रयास गरिरहेको भनेर व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिदेखि देउवाले निर्वाचनमा भाग लिन असन्तुष्ट पक्षलाई गरेको आग्रहसम्मका खबर गोरखापत्रको पहिलो पृष्ठमा अटाएका छन् ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकार र मोर्चा कति नजिक, कति टाढा भएको विषय उठाएको छ । यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ७ प्रतिशत भएको जानकारीका साथै म्यादी प्रहरीको पोसाक अन्योलमा परेको विषय नयाँ पत्रिकाको प्राथमिकतामा परेको छ ।
नागरिक दैनिकले रेलमा चीनको उच्च चासो राखेको विषयलाई मुख्य खबर बनाएको छ ।
राजधानी देीनकले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमतिको अन्तिम कसरतमा जुटेको बताएको छ । ‘पहिचानमै समस्या, आयोगले माग्यो परिभाषा र विवरण’ शीर्षकमा अर्को खबर लेखेको राजधानीले प्रहरीमा निरााशा छाएको अर्को खबर पनि पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
कान्तिपुरले मतदाता छपाइ भोलिदेखि हुने खबर लेखेको छ । मलेसियामा ५ लाख नेपाली मारमा परेको, वैद्यले निर्वाचनमा भाग लिने विचार राखेको र केही सरकारी विद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाह गरेको खबर पनि उसले विभिन्न शीर्षकमा छापेको छ ।